အစ္စရေးတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း မရှိသည့်ဆရာများအား စာသင်ခွင့်ပိတ်ပင် - Xinhua News Agency
ဂျေရုဆလင်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားခြင်းမရှိသည့် ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ များအနေဖြင့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကင်းစင်ကြောင်း ဆေးစစ်ထားသော်ငြားလည်း ကျောင်းဝင်း အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်တားမြစ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း အစ္စရေးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ပြောခဲ့သထိုဆုံးဖြတ်ချက်အရ COVID-19 ကာကွယ်ဆေထိုးနှံခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန် ခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သော Green Pass မပြနိုင်သည့်ဆရာဆရာမ များအနေဖြင့် ၈၄ နာရီ ထက် နောက်မကျသည့် RAT စစ်ဆေးချက် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကန့်သတ်ချက်သည် နိုင်ငံအတွင်း COVID-19ရောဂါမြင့်မားစွာ ကူးစက်နေမှုအားလျှော့ချရန် ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့နေချိန်တွင် ပိတ်ထားခြင်း မရှိသည့် ပညာရေးကဏ္ဍ အတွက်လည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များအရ ၎င်းအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော ကျောင်းများနှင့် မူကြိုများမှ ဆရာဆရာမများအား ပျက်ကွက်သည့်နေ့များအတွက် လစာပေးမည်မဟုတ်သည့်အပြင်၊ Zoom ဖြင့်သင်ကြားမှုအားလည်း ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JERUSALEM, Sept. 23 (Xinhua) — Israeli teachers who have not been vaccinated against the COVID-19 will be banned from entering schools unless they presentanegative test result, Israeli Ministry of Education said on Thursday.
Under the instructions of the ministry, the teachers of schools and kindergartens who do not meet these conditions will not be paid for the days of absence, nor will they be allowed to teach remotely through Zoom. Enditem